Ukunyuka ngokuqatha kwizikhululo zeenqwelomoya kuya kukuthintela ukubuyela ekuhambeni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Ukunyuka ngokuqatha kwizikhululo zeenqwelomoya kuya kukuthintela ukubuyela ekuhambeni
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Iindleko zeziseko zophuhliso ezonyusa i-2.3 yezigidigidi zeedola ngexesha lengxaki zihlasimlisa, itsho i-IATA.
Ukonyuka okucwangcisiweyo kweentlawulo zezikhululo zeenqwelo moya kunye nabanikezeli beenkonzo zokuhamba ngenqwelo moya (ANSPs) kuya konakalisa unxibelelwano lwamanye amazwe.
Ukuqinisekiswa kwesikhululo seenqwelomoya kunye nentlawulo ye-ANSP sele ifikelele kwi- $ 2.3 yezigidigidi.
Ngokudibeneyo, ii-ANSPs zamazwe angama-29 e-Eurocontrol zifuna ukubuyisa phantse i-9.3 yezigidigidi zeedola (i-8 yezigidigidi zeerandi) kwiinkampani zeenqwelo moya ukuhlawula ingeniso engafumanekiyo ngo-2020/2021.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) ulumkise ukuba ukunyuka okucwangcisiweyo kweentlawulo zezikhululo zeenqwelo moya kunye nabanikezeli beenkonzo zokuhamba ngenqwelomoya (ANSPs) kuyakumisa ukubuyela kuhambo lomoya kwaye konakalise unxibelelwano lwamanye amazwe.
Ukuqinisekiswa kwesikhululo seenqwelomoya kunye nentlawulo ye-ANSP sele ifikelele kwi- $ 2.3 yezigidigidi. Ukonyuka okuthe kratya kungaliphinda kalishumi eli nani ukuba izindululo esele zandlalwe kwizikhululo zeenqwelo moya kunye nee-ANSP zinikiwe.
“Isityhwentywe semali esiyi- $ 2.3 yezigidigidi inyukile ngelixesha lentlekele. Sonke sifuna ukubeka i-COVID-19 ngasemva kwethu. Kodwa ukubeka umthwalo wezezimali wobunzima be-apocalyptic proportions kumqolo wabathengi bakho, ngenxa yokuba unakho, sisicwangciso-qhinga sentengiso esinokuphupha kuphela sisodwa. Ubuncinane ubuncinci, ukunciphisa indleko-hayi ukunyuswa kwentlawulo-kufuneka kube phezulu kwi-ajenda kwisikhululo seenqwelomoya ngasinye nakwi-ANSP. Yenzelwe iinqwelomoya zabo zabathengi, ”utshilo UWillie Walsh, uMlawuli-Jikelele we-IATA.
Ityala elichaphazelekayo lifunyanwa phakathi kwabanikezeli beenkonzo zokuhamba ngenqanawa baseYurophu. Ngokudibeneyo, ii-ANSPs zamazwe angama-29 e-Eurocontrol, uninzi lwazo lukarhulumente, zijonge ukubuyisa phantse i-9.3 yezigidigidi zeedola (i-8 yezigidigidi zeerandi) kwiinkampani zeenqwelo moya ukufumana ingeniso engafumanekiyo ngo-2020/2021. kunye neenzuzo abaziphosileyo xa iinqwelomoya zazingakwazi ukubhabha ngexesha lobhubhane. Ngapha koko, bafuna ukwenza oku ukongeza kwi-40% yokunyuka okucwangciselwe u-2022 kuphela.
Eminye imizekelo ibandakanya:
Isikhululo senqwelomoya saseHeathrow sinyusa ukonyusa ngaphezulu kwe-90% ngo-2022.
Isikhululo senqwelomoya iAmsterdam Schiphol sicela ukonyusa imali engaphezulu kwama-40% kule minyaka mithathu izayo.
I-Airports Company South Africa (ACSA) icela ukunyusa iirhafu ngama-38% ngo-2022.
I-NavCanada inyusa iindleko nge-30% ngaphezulu kweminyaka emihlanu.
I-ANSP yase-Ethiopia iphakamisa iindleko nge-35% ngo-2021